A gaghị m ekwezị ka E gbuo ma ọ bụ tọrọ mmadụ n'ala Naịjirịa -- Buharị
Onyeisi ala anyị bụ Muhammadu Buharị ekworola ntutu ya taa ma kpebie na ọchịchị ya agaghị anwakwazị anwa kwe ka e gbuo ma ọ bụ tọrọ mmadụ ọbụla na mpaghara ọbụla n'ala Naịjiria. Onyeisi ala Buharị mere ka a mara nke a na Pọọtụ Hakọọtụ
n'okwu o kwuru n'ịgbape mmemme otu jikọtara ndị eze ọdịnala niile nọ n'ala Naịjiria, agba nke iteghete ya, ma bụrụkwa nke isiokwu ya bụ "Nchekwa Ime Ime Obodo Dịka Ụzọ Kacha Mma Iji Gbochie Mpụ: Ọrụ Ndị Eze Ọdịnala".
Buharị, nke onye nọchitere anya ya bụ onye minista na-ahụ maka ihe na-eme na gburu gburu anyị, bụ maazị Abduraham Dambazau, kọwara na ọ na-ewute ya nke ukwuu ma na-egbu ya mgbu n'obi banyere otu ndị otu dị iche iche si egbusi, na-atọrọ ma na-ememila ndụ ndị mmadụ n'ọtụtụ mpaghara ebe dị iche iche n'ala anyị, ma chee na o nweghị onye na-ahụ ha.
O gosiputara obi mwute ya banyere ụdị mpụ ahụ, kwuo n'ezi na nke ahụ na-egbu ya mmụọ, tinyekwuoro na nke ahụ na-adọghachi aka elekere azụ n'ebe o metụtara ọnọdụ mmepe, nkwalite akụnụba na ịkọpụta ihe oriri n'ala anyị. O kwukwazịrị na ọchịchị ya ga-aga n'ihu ịnwụchikọ ndị arụrụ ala ahụ na-eme ihe dị otu a ma kpụpụ ha ụlọ ikpe dịka o siri kwesi ekwesi n'usoro iwu na-achị ala anyị.
N'okwu nke ya, onye a nọ na steeti ya were eme ọgbakọ ahụ, bụ aka na-achị steeti Rivaasị, gọvanọ Nyesom Wike kwuru hoohaa na ọ jọgburu udele na njọ ma sigbuo nkakwụ n'isi, bụ ajọ ọnọdụ nchekwa ahụ na-ebi ụmụ mmadụ aka ọjọọ na mpaghara ime obodo na steeti dị iche iche n'ala anyị.
Ọ katọrọ mwakpo ndị ọjọọ a wakpogoro ọtụtụ ebe na ótú ha sigoro weta ala adịghị mma, ma kpọnwee oku ọzọ ka e nwee mnwogharị n'òtù ọrụ nchekwa dị iche iche n'ala anyị, kwụsị iji ha egwu okwe ndọrọ ndọrọ ma hafee ụfọdụ n'ime ha n'aka steeti, iji wee kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ma mee ka o siwanye ike.
O kwuru na ọnọdụ nchekwa dị n'ala anyị ugbua apụghị imewu ihe ọbụla banyere okwu ahụ a kpụ n'ọnụ, sị na ya eguzobela nchekwa agbataobi, ma kpọkuzie ụmụafọ Naịjiria ka onye ọbụla mụrụ anya ka azụ, ọbụnadị dịka ọ dụrụ ndị gọvanọ ibe ya ka onye ọbụla kwalitekwuo ndị ọrụ nchekwa ma mee ka ọrụ ha pụtawanyekwuo ihè na steeti ha dị iche iche.